Ama-SA U19s afuna ukuqhubeka “nezikhathi eziguqula umdlalo”
Umdlali okwenzakonke kuma-Coca-Cola South Africa U19s, u-Hermann Rolfes ukholwa ukuthi ukhiye ekuqhubekeni kweqembu nokuphumelela kwi-ICC U19 World Cup kuzoba ukunqoba izikhathi ezincane okungahamba kushintshe indlela umdlalo ohamba ngayo. Ukuvimba kahle uma kudlalwa okungathola i-run out noma ukunqaka okuncomekayo kungashintsha umdlalo uhlale ezandleni zeqembu elivimbayo futhi u-Rolfes uthi kube ikhona kokubili lokhu kanye nokuzimisela kweqembu okwenze baphumelele emqhudelwaneni okwamanje.
“Okukodwa kuma-KPI (Key Performance Indicators) ethu ukuchaza kanye nokuthatha inzuzo ezikhathini ezithile kumdlalo,” kusho u-Rolfes. “Kungaba yinto ethola i-wicket noma ukuvimba kahle okushintsha isimo sengqondo seqembu kanye nokunyusa ukuzithemba emuva kwesikhathi eside emdlalweni lapho bekungenzeki lutho khona. Ayikho incazelo ebhalwephansi ngaphandle kokuthi kushintsha umdlalo uze ezandleni zethu. Sifuna ukuqhubeka nalokho futhi kube imidlalo yethu kwi-World Cup futhi lemizuzwana uma isibalwa, iphenduka okuhle ekupheleni kosuku.”
Lama-Proteas amancane asenqobe yombili imidlalo yabo kumqhudelwano okwamanje, bangena kwisigaba se-Super League besasalelwe umdlalo owodwa futhi balungiselela omunye umdlalo obalulekile, bedlala nabaphethe umqhudelwano futhi abaphezulu ku-Group A, i-New Zealand e-Bay Oval ngoMgqibelo. Bahlula i-Kenya ngama-runs angu-169 futhi izolo lokhu, i-West Indies kumdlalo wabo we-day-night wokuqala kumqhudelwano ngoLwesithathu. Umdlalo wangoMgqibelo uzophinde futhi ube i-day-night.
u-Rolfes uthi ukusekelwa akuthola eqenjini kwamuvumela ukuthi abe nekhanda elicwebile ngaphansi kwencindezi bedlala ne-West Indies lapho athola khona u-4/33 futhi nolwazi lokuthi usekelwe adlala nabo kwamuvumela ukuthi aqhubeke azame. Lokuzithemba ebantwini abasondele kuyena kuyingxenye kokusondelana kweqembu kumqhudelwano.
“Ngempela, ukwazi ukuthi kunabafana abangu-10 abasondele kuwena ongancika kubona yinto enkulu uma udlala kumdlalo onencindezi eningi okumele uwunqobe,” esho eqhubeka. “Okuhle ngaleliqembu ukuthi siyazwana ngaphakathi nangaphandle kwenkundla, sisondelene kunamanye amaqembu. Uma kukhona incindezi, ngiyazi ukuthi ngingabheka u-Raynie (ukapteni, u-Raynard van Tonder) nabadlali ukuthola iseluleko noma ukukhuluma kancane ukuze ngigqugquzeleke. Imizuzwana eshintsha umdlalo iqhamuka lapho.”
Njengoba bebheke kuokusele emqhudelwaneni, u-Rolfes uthi kubalulekile ukuthi umdlandla abawutholile bawubhekise emdlalweni owodwa ngesikhathi futhi bangabheki phambili kakhulu.
“Singathatha ukuzithemba okuningi kulowomdlalo (bedlala ne-West Indies), kusinika ukugqugquzeleka okuningi. Iqembu lizizwa kahle futhi ligxile kwinselelo elandelayo bedlala ne-New Zealand. Sifuna ukuncika kulokhu okujwayelekile futhi izinhlelo zethu ukuzisebenzisa ngamakhono ethu.”
Womabili amaqembu azolwela indawo ephezulu kwi-log. i-New Zealand, elingene ne-South Africa ngamaphuzu amane ane-net ruun rate engcono ebabeka phezulu. u-Rolfes ufisa ukubasusa lapho ekupheleni komdlalo.
“Kuzoba inselelo enhle,” esho evala. “Ngicabanga ukuthi sizongena emdlalweni nomqondo wokunqoba futhi nokuqhubeka nomdlandla kuyongenela kuma-knockout stages. Sizoqhubeka sikuthatha umdlalo nomdlalo futhi sigxile kumdlalo owodwa ngesikhathi futhi ngethemba singathola okunqoba futhi.”
Umdlalo we-South Africa ku-Group A uzovezwa ku-SuperSport 2 kusukela ngo-02:45 (SAST). Ukuhambo komdlalo kuzosakazwa ezinkundleni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica ) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa)
Ama-SA U19s adlulela kwi-U19 World Cup Super League i-SA U19s ilungele inxenye yokulungiselela i-World Cup Abadlali bakutholile akade bekudinga kumdlalo wokugcina wamalungiselelo – u-Gwavu u-Mahatlane uyajabula ngenqubekaphambili yama-U19 ngaphambi kohambo lokuya kwi-World Cup "Ukusebenzisa amakhono” kuzo ukhiye wokunqoba i-final ye-Youth Tri-Series kusho u-Gwavu i-England U19 inqoba kabili idlala ne-SA nokho u-Breetzke ethole ikhulu i-SA U19 ibuye kahle nge-bonus-point, nokunqoba nge-Duckworth-Lewis Ama-SA U19 alungele ukukhuphula izinga kumdlalo wokuqala we-day/night Youth ODI ekhaya u-Coetzee no-Molefe bahlelela i-SA u19 ukunqoba nge-bonus-point u-Van Tonder ufuna ukucacisa kumdlalo wokuqala we-Youth Tri-Series Molefe uthatha ama-wicket amahlanu kumdlalo wesibili oqedwe imvula